Ciidamada Itoobiya oo Dagaal kala horyimid Ciidamada Dowladda. - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada Itoobiya oo Dagaal kala horyimid Ciidamada Dowladda.
Ciidamada Itoobiya oo Dagaal kala horyimid Ciidamada Dowladda.
Ciidamada Itoobiya ayaa maanta Dagaal bareer ah waxaa ay kala horyimaadeen Ciidamada Dowlada ee Magaalada Beledweyne ee Xarunta Hiiraan.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay ciidamada Dowladda Soomaaliya oo lugeynaya ay mareen xaafad sida la sheegay ciidamada Ethopia ay bandoow kusoo rogeen islamarkaana ay ka mamnuuceen socodka dadka.
Ciidanka Dowlada ayaa la sheegay inay ka biyo diideen hadalka ciidamada Ethopia ee ku aadan inaysan mari karin xaafada bandowga la geliyay,halkaasina waxaa ay labada ciidan isku weeydaarsadeen rasaas khasaaro dhalisay.
Waxaa la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi dhexmaray ciidamada Ethopia iyo kuwa Dowladda.
majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka Maamulka Dowladda ee Gobalka Hiiraan oo ku aadan dagaalkaasi la sheegay inuu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethopia.